အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဟာ ကိုယ့်အတွက် ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲ? - Wall Street...
Home | ဘလော့ခ် | အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဟာ ကိုယ့်အတွက် ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲ?
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဟာ ကိုယ့်အတွက် ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲ?
Jul 17, 2018 &VerticalLine;
ပညာရှင် Ludwig Wittgenstein က ဆိုပါတယ်။ “ ဘာသာစကား ကန့်သတ်ချက်က ကိုယ့်နယ်ပယ်အတွက် ကန့်သတ်ချက်ပါပဲ” တဲ့။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဟာ နိုင်ငံတကာမှာ ပြောဆိုတဲ့ ဘာသာစကားဖြစ်တာကြောင့် သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ချက်ကို ပိုမို ကျယ်ပြန့်စေပါလိမ့်မယ်။
ရည်မှန်းချက် ရပ်တည်ချက်တစ်ခုတည်းအတွက်တင်သာမက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တိုးတက်စေဖို့လဲ အဓိက ကျလှပါတယ်။
ပညာရေးဟာ ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့ အနာဂတ်ကို အရောက်သွားနိုင်သလို အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အသွေးနဲ့ ဆိုရင်တော့ ပိုမိုကောင်းမွန် သာလွန်တဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုနဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို ရောက်ရှိစေပါလိမ့်မယ်။
မိခင် ဘာသာစကားအပြင် တစ်ခြား ဘာသာစကား သင်ယူခြင်းက ဦးနှောက်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေပြီး
ဖန်တီး တီထွင်မှုနဲ့ ဘက်စုံလေလ့ာမှုတွေဘက်မှာ ပိုမို တိုးတက်စေပါတယ်။
ဘာသာစကား ၂ မျိုးလောက် တတ်ကျွမ်းတာက မှတ်ဉာဏ်အားကောင်းစေပြီး အသက်အရွယ် ရလာချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ သတိမေ့တတ်ခြင်းကို လျှော့ပါးသက်သာစေပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်ပုံက ဘဝတစ်သက်တာနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား တတ်ကျွမ်းတဲ့အခါ စာအုပ်စာပေ၊ ဇာတ်လမ်းရုပ်ရှင်၊ ရှိုးပွဲ စတဲ့ အမျိုးမျိုးသော ဖျော်ဖြေမှု ကဏ္ဍတွေကို ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်း ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားတွေ၊ ရှိုးတွေ ကြည့်တဲ့အခါ နဲ့ ဘာသာပြန်ပေးမယ့်သူ ဒါမှမဟုတ် မြန်မာစာတန်းထိုးကို စောင့်နေရတာမျိုး မလိုအပ်တော့ပါဘူး။
။ စာအုပ်စာပေတွေဆိုရင်လဲ ဘာသာပြန်တဲ့ စာအုပ်က အနည်းငယ်သာရှိတဲ့အတွက် ကိုယ်ဖတ်ချင်တဲ့ စာအုပ်ကို
အနှစ်သာရ မိမိဖတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် အင်္ဂလိပ်လို တတ်ကျွမ်းနားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။
နိုင်ငံရပ်ခြား ခရီးသွားရင်း လမ်းပျောက်သွားတာ၊ အစားအသောက်မှာယူတာ စသဖြင့် ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေမှာ တစ်ခြား ခရီးဖော်တစ်ဦးဦးကို အမြဲ အကူအညီတောင်းလို့ ရနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာအချက်ပါ။
နိုင်ငံခြား သွားမယ်ဆိုရင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား အသုံးပြု ပြောဆိုတတ်တာက အထိရောက်ဆုံး နည်းလမ်းပါပဲ။
အင်္ဂလိပ်လို နားလည်တတ်ကျွမ်းတာက မတူကွဲပြားတဲ့ နိုင်ငံတကာ လူနေမှုနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို လေ့လာရာမှာလဲ အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား အသုံးပြု ခရီးသွားခြင်းက ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတိုးတက်စေပြီး အမြင်ကျယ်စေပါတယ်။
“ဘာသာစကားဆိုတာ ယဉ်ကျေးမှုလမ်းပြမြေပုံပါပဲ။ လူတွေ ဘယ်လိုသွားလာ နေထိုင်တယ်ဆိုတာ သိနိုင်တာမျိုးပေါ့” လို့ အမေရိကန် စာရေးဆရာမ Rita Mae Brown က ဆိုပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား အသုံးပြုတာက နိုင်ငံတကာနဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး မတူကွဲပြားတဲ့ ဖြတ်သန်းမှုအမျိုးမျိုးကို တွေ့မြင်ရမှာကြောင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင် ပိုကျယ်ပြန့်စေပြီး အမြင်သစ် အတွေးသစ်နဲ့ မျှဝေခံစားနိုင်စွမ်းတွေ ရရှိစေပါတယ်။